२०७६ माघ ६, सोमबार
काठमाडौं (शेर्पाखबर) । हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा ट्रेण्डिङमा पर्न र भाइरल बन्न मानिसहरु अनेक हतकण्ड अपनाइरहेका हुन्छन् । अनेकन छारष्ट नाटकहरु गरिहेकका भेटिन्छन् । कुनै न कुनै रुपमा चर्चा आउने र सस्तो लोकप्रियता कमाउने ध्याउन्नमा उनीहरु देखिन्छन् र त्यसलाई यूट्युबरहरुले पनि राम्रै साथ दिइरहेको छन्् । यसबाट समाज कता जान्छ ? कस्तो सन्देश दिन्छ ? सामाजिक बनोट र हाम्रो संस्कृतिलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने तिर खास कसैको ध्यान गएको भने देखिँदैन । युटुबमार्फत सस्तो लोकप्रियता र अर्थोपार्जन (डलरखेती) तिर मस्त रुपमा लागेकाहरुको कमि छैन ।
तर, यस्ता सस्तो लोकप्रियताले समाजलाई नकारात्मक दिशातिर डोहोर्याई रहेको बेला शेर्पा समुदायका चर्चित गायक दावा के. शेर्पाको एउटा गीत भने ट्रेण्डिङमा परेको छ । अघिल्लो साता उनको शब्द र स्वरमा रहेको ‘माछी जालैमा’ बोलको गीत युट्युवको ८ नम्बरमा थियो । यो ऐतिहासिक र पहिलो रेकर्ड हो । अहिले उक्त गीतको म्युजिक भिडियोले वान एम अर्थात एघार लाख बढी दर्शकले हेरिसकेका छन् भने धेरैले मन पराउनुका साथै सकारात्मक प्रक्रिया समेत जनाएका छन् ।
शनिबार गायक दावाले यो गीत राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गाए । त्यहाँ हजारौं युवाहरुले उनलाई त्यही गीत सँगसँगै गएर साथ दिए । मञ्च (स्टेज) मा गायक दावा उक्लिने वित्तिकै दर्शकदीर्गबाट ठूलो आवाजमा गुन्जियो ‘माछी जालैमा कान्छी फेवा तालैमा ।’
प्रदीप लामाको निर्देशन, अवधारण रहेको म्यूजिक भिडियोमा दावा के स्वयम्, प्रदीप लामाएलिस शर्मा लगायतले अभिनय गरेका छन् । म्यूजिक भिडियो कुलेखानी आसपासमा छायाँकन गरेको हो । ‘दि नेस्ट टिम’मार्फत उक्त म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
हुनत उनको यो मात्रै गीत हैन । गायक दावाको ‘लाहुरे, हुरहुर धौत्तरी लगायत दर्जनौ गीतहरु छन् । अधिकांशको म्यूजिक भिडियोपनि युट्युवमा दावा के शेर्पा भनेर खोज्ने वितिकै आइहाल्छ । यसअघि शिल्पा पोखरेल, चल्तीका नायक पल शाह लगायतले दावाको गीतमा मोडलिङ गरिसकेका छन् । तर, यो पटकको म्यूजिक भिडियोले भने उनको गायकी जीवनमा नै अर्को मोडमा पुर्याई दियो । उनी भन्छन् ‘यो गीत आफैलाई राम्रो लागेको थियो । म्युजिक भिडियो कस्तो बन्छ भन्नेमा संशय थियो । तर, भाग्यले साथ दियो अनि प्रविधिले पनि । सोचे जस्तै भिडियो बन्यो । अहिले ट्रेण्डिङमा परेको छ । म खुसी छु । दर्शकको अथाहा माया प्रति नतमस्तक छु ।’
सोही मञ्चबाट चर्चित गायक गम्बु शेर्पाले ट्रेण्डिङको प्रसंग निकाले र प्रशंसा पनि गरे । ‘अहिले शेर्पा समुदायका एक होनाहार गायक दावा के शेर्पाको गीत ट्रेण्डिङमा परेको छ । यो शेर्पा समुदायकै लागि राम्रो कुरा हो । यसले हामी कलाकारलाई उत्साहित बनाएको छ । अझै हामी सबै मिलेर दावालाई सहयोग गरौं । हौसला दिऔं ।’
शेर्पा समुदायमा आयोजना हुने प्राय सांस्कृतिक कार्यक्रमको पोष्टर्मा दावाको फोटो छुट्दैन । उनलाई राम्रो शब्द रचना गर्ने र स्वरका धनी भनेर चिनिन्छ । उनको तस्वीरसहित पोष्टर छापिएसँगै दर्शकहरु झुमिन्छ । उसो त युट्युवमा ट्रेण्डिङमा मात्रै हैन । अहिले चल्तीमा रहेको ‘टिकटक’ मा पनि दावा के.को माछी जालैमा गीतको थुप्रै टिकटक भिडियोहरु भेटिन्छ ।
दावा के अहिले शेर्पा कलाकार संघको महासचिव पनि छन् । उनी यतिवेला गायन क्षेत्रमा दुई पाइला अघि बढेर सफलता हात पारिसकेका छन् । उनी राष्ट्रिय रुपमा ख्यातीका लागि थप मेहिनेत गरिरहेका छन् । हुन त उनले थुप्रै राष्ट्रियस्तरका कलाकारसँग ‘डोयट’ गरेका छन् । माछी जालैमा गीतमा चर्चित गायिका मेलिना राईले दावालाई गायनमा सघाएकी छिन् ।
यतिवेला लोसार पनि नजिकीँदै छ । नेपाल बाहिर र भित्र लोसारको अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक, सांगीतिक कार्यक्रमहरु आयोजना हुँदैछ । प्रायः दावा केको तस्वीर पोष्टरहरुमा छुटेको छैन । पोष्टरहरुमा सजिनु र युट्युवमा ट्रेण्डिङमा पर्नु संयोजक मात्रै नहोला दावाको गायनले सार्थकता पाउँदै गएको भनेर पनि बुझाउँछ ।
भोजपुरमा जन्मेर काठमाडौंमा कलाकारितामार्फत जीवन खोजि रहेका गायक दावा केलाई हामी सबैको साथ चाहिएको छ । उनको माछी जालैमा गीतले जसरी दर्शकलाई जालमा पर्यो त्यसरी नै हामीले पनि उन थप हौसला दिएर उनको अदभूत क्षमतालाई जालमा पार्नु पर्ला की ?
लाक्पा जी. शेर्पा का अन्य लेख तथा रचनाहरु
खिजीदेम्बालाई लाइन्सको स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग
संयूक्त ल्होसार मनाउन ‘टानबाट शुरु’